ktmkhabar.com - अभिनेत्री प्रीति जिन्टा बनिन् जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा
आफै निर्विरोध घोषणा गरेर भाग्न लागेका ओलीलाई घिसारेर चुनावी मैदानमा ल्याउनु नै रावलको जित !
ओली दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित !
अभिनेत्री प्रीति जिन्टा बनिन् जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा
बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टा जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा बनेकी छिन्। बिहिबार उनी र उनका श्रीमान जिन गुडइनफले प्रशंसकलाई इन्स्टाग्राम पोस्टमार्फत् आफ्ना जुम्ल्याहा बच्चा जन्मेको सर्प्राइज घोषणा गरेका हुन्।
इन्स्टाग्राममा प्रीतिले श्रीमान जीनका साथमा खिचेको फोटो पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन्, ‘नमस्ते सबैलाई, म आज तपाईंहरु सबैसँग हाम्रो खुसीको समाचार सुनाउन चाहन्छु। जीन र म अत्यन्तै हर्षित छौं र हाम्रो हृदय कृतज्ञता र मायाले भरिएको छ किनकी हामीले हाम्रा जुम्ल्याहा बच्चा जय जिन्टा गुडइनफ र जिया जिन्टा गुडइनफलाई परिवारमा स्वागत गरेका छौं। हामी जीवनको नयाँ चरणबारे उत्साहित छौं।’
प्रीति र जीनका बच्चा सरोगेसीबाट जन्मेका हुन्। अभिनेत्रीले आफ्नो पोस्टमा सरोगेट र डाक्टहरुलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘यो अविश्वसनीय यात्राको हिस्सा भइदिएकोमा डाक्टर, नर्स र हाम्रो सरोगेटलाई हार्दिक धन्यवाद– प्रीति, जीन, जय र जिया।’
प्रीति जिन्टा र जीन गुडइनफले सन् २०१६ को फ्रेबुअरीमा विवाह गरेका थिए। विवाहपछि उनीहरु अमेरिकाको लस एन्जलसमा बसाइँ सरेका थिए। उनीहरुको जुम्ल्याहाबारे घोषणासँगै प्रशंसकहरु चकित र हर्षित भएका छन्।
प्रीति जिन्टाबलिउड अभिनेत्री
अभिनेत्री जेनिफर लोपेज चौथो विहे गर्दै
एमाले महाधिवेशन : भाजपाका डा‍. हर्षवर्धन र हरिश द्विवेदी सहभागी हुने
इमरान खानले भने : देश चलाउने पैसा छैन
गायिका प्रविशा दुलही बनिन्